Chivabvu 23, 2018 arun
German Stock Exchange vafunga nezvekutanga Bitcoin zvigadzirwa
German Boerse, muridzi Frankfurt Stock Exchange, ari kufunga kupa cryptocurrency zvigadzirwa, maererano nomushumo.
Vachitaura vari maindasitiri chiitiko muLondon neChitatu, Jeffrey Tessler, musoro zvakasimba kunoita vatengi, zvinhu uye misika moyo akati:
“Tiri pakadzika basa nacho.”
US anotangazve ane kuongorora zvisiri pamutemo Bitcoin mutengo evanhu
The Justice Department akavhura imwe feya zvisiri pamutemo zvokutengeserana, zvakananga kana vatengesi vari criminally kutyora mutengo Bitcoin, maererano vanhu vana vanoziva nyaya yacho.
Federal Vachuchisi vari kushanda pamwe chete chinhu hwamangwana Trading Commission, mumwe regulator zvemari kuti rinotarisira nomukaka yakasungirirwa Bitcoin.
Kusiri nzira kuti Department Justice rinonyatsotarira anosanganisira spoofing ndinoshamba wokutengesera, izvo zvisiri pamutemo tsika dzinogona mitengo. In spoofing, mumwe muzvinashawo ichizviisa mirairo uye ipapo anobva audza navo kamwe mitengo vanotama mune zvandinenge mirayiridzo.
Wash zvakaenda kungandipa mubiridziri zvokutengeserana pamwe vaizvitora kupa venhema maonero musika kudiwa kuti unokwezva vamwe kuti svetuka mu zvakare.
Ava marudzi kubiridzira kuti regulators vakapedza makore kuedza kudzura neramangwana uye equities misika.
Thai bhangi rinopedzisa kutengeserana dzakawanda kushandisa blockchain
Thailand zvaJehovha Krungsri kubhengi akabudirira kudzidzisa muchinjikwa pamuganhu mutengapwe “panyaya mumasekonzi” pamwe bhengi Singapore uchishandisa blockchain.
Kushandisa ruzivo urwu mune ramangwana achabvumira Singapore kubhengi, Mitsubishi, uye anofungidzirwa mamwe makambani kuti “zvakare kuvandudza kwayo liquidity utariri kunyatsoshanda uye kuderedza mutengo wavo” mubhengi akati.
First crypto ruzhowa Fund raparurwa mu Australia
Australia wose Capital wakatanga kurwisa munyika cryptocurrency-pfungwa yokutanga ruzhowa mari chitoro vanoita.
Tom Surman, co-muvambi uye mukuru mukuru Australia anotsanangura inivhesitimendi utariri kambani, akati:
“Tine vanodada kuva rokutanga mari chitoro kuti cryptocurrency uye blockchain rwokugadzira iripo somunhu nokuveza-kumucheto mari zvose Australian. "
Maererano Surman, apo vokuAustralia vakawanda vari kutarisira mari mu cryptocurrencies, kushaya unyanzvi anoziva ari kudzivirira vakawanda vavo kubva Diving munzvimbo digitaalinen mari zhinji.
Japanese Tech hofori GMO kumonera kubuda 7nm Bitcoin mucheri
Japanese IT Zirume GMO Internet wakaiswa kumonera mumwe mudziyo Bitcoin mugodhi kwakavakirwa 7nm Chips Papera gore rino.
The makasimba akati zviri nezvekutanga idzva B2 mucheri musi June 6th pamwe gobvu kugadzirwa kuti nokukurumidza kutevera, uye zvinyorwa kutanga muna October.
The chiziviso vati mudziyo vanofanira kupa mukuru-kwevari hashing simba hwakaderera magetsi zvinodiwa.
Coinbase anowana crypto Exchange Paradex & anoronga kupa minamato panze US
Coinbase, chikuru crypto Exchange chikuva muna US, awana decentralized Exchange pachikuva Paradex.
Paradex munhu wezera rangu-kuti-vezera basa kuti inopa vanoshandisa kukwanisa kuchinjanisa cryptos zvakananga kubva wallets dzavo pane kushandisa centralized mabasa akafanana Coinbase, Gemini, nezvimwewo. saka, vanozvishandisa vane uzere custodial kodzero pamusoro zviratidzo zvavo uye Fiat guru.
Coinbase anoronga kuti zvimwe enhancements kuti mabikirwo uye vomurova mabasa Paradex kuti vatengi kunze United States.
Hukuru Czech simba kambani kugamuchira Bitcoin kubhadhara
Rimwe remasangano negasi Makambani muCzech Republic, Prague gasi, akazivisa urongwa kugamuchira Bitcoin mwedzi unotevera.
The simba kambani ndiyo chete boka iri indasitiri kutora danho rakadaro.
parizvino, Prague Gas magetsi rinopiwa More kupfuura 420,000 vatengi vane gasi.